Ny sakafo ratsy indrindra ho an'ny ankizy | Bezzia
Inona no sakafo ratsy indrindra ho an'ny ankizy
Maria Jose Roldan | 01/10/2021 22:57 | Reny torohevitra
Ny ray aman-dreny dia tokony hanome anjara toerana lehibe amin'ny sakafo maha-zanany. Tsara fa satria mbola kely izy ireo, dia manaraka ny fahazarana mety ny ankizy raha ny amin'ny sakafo no resahina. Tokony ho fantany amin'ny fotoana rehetra ny zavatra mahasalama ny vatany sy izay manimba.
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hiresaka momba izany isika ireo sakafo manimba tanteraka sy manimba ny fahasalaman'ny kely.
3 Vovoka kakaô
4 Pastry indostrialy
5 Sakafo efa voahodina
Ny tsiranoka dia sakafo manankarena gliosida misy siramamy marobe toy ny glucose sy fructose. Ny fanjifana ranom-be loatra dia mety hiteraka diabeta sy olana amin'ny lanjany mandritra ny fotoana maharitra. Ho solon'ny jus, ny safidy tsara indrindra dia ny ronono omby na rano.
Ny ankamaroan'ny serealy hita ao amin'ny supermarket, ambany sanda ara-tsakafo ary manankarena siramamy. Mampalahelo ary na eo aza ny hita, io no vokatra kintana amin'ny sakafo maraina an'ny ankizy. Raha manolotra serealy ho an'ny ankizy kely, ny safidy tsara indrindra dia ny oats. Izy io dia sakafo misy anjara biriky amin'ny angovo lehibe ary manome fibre kalitao ho an'ny vatana.
Ny iray amin'ireo sakafo malaza indrindra sy manimba indrindra an'ny ankizy dia ny vovo-koko. Ny zaza tsy mihinana sakafo maraina miaraka amin'ny ronono vera sy kakaô mety levona dia tsy fahita firy. Tahaka ireo vokatra efa hita etsy ambony, ny kakaô mety levona zara raha manome otrikaina ary manana siramamy betsaka. Ny safidy tsara indrindra dia ny fihinanana kakao tsy misy kilema ary amin'ny fahadiovana 100%.
Vitsy ny sakafo manimba sy ratsy ny zaza toy ny mofomamy indostrialy. Ireo dia vokatra misy tavy trans sy siramamy tsotra. Ny fanjifana tafahoatra an'ireo pastry ireo dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana lehibe ho an'ny kely amin'ny salantsalany sy maharitra. Ny tsara indrindra dia ny mifidy ny lafarinina voankazo na wholemeal satria salama kokoa izy ireo.
Sakafo efa voahodina
Ireo sakafo ireo dia misy additives maro ary manankarena amin'ny tavy trans sy sira. Izany no antony tokony hanesorana ireo vokatra toy izany amin'ny sakafo isan'andro ataon'ny zaza ary misafidy foana ny lovia an-trano vita amin'ny akora voajanahary tsy misy additives toy ny legioma, trondro na atody.
Raha fintinina dia ireto no sakafo sasany izay tsy tokony ho eo amin'ny sakafon-jazakely na ankizy. Ny zavatra tsara indrindra amin'ny tranga rehetra dia ny misafidy sakafo an-trano vita amin'ny sakafo vaovao toy ny anana na legioma. Ny ray aman-dreny dia tokony hahalala mandrakariva ny fanomezana sakafo mahavelona ho an'ny zanany.
Ny sakafo tsara sy marina dia miankina amin'ny hoe afaka mitombo ilay zaza amin'ny fomba salama ary tsy misy olana ara-pahasalamana. Ao anatin'ny fanabeazana dia tokony hanana anjara toerana lehibe ny fahazarana mihinana tsara, mamela ny zaza hihinana tsara. Ny fahazarana misakafo araka ny tokony ho izy rehefa mampahalala azy ny ankizy mandritra ny taona maro izay manimba ny fahasalamany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » RENY » Reny torohevitra » Inona no sakafo ratsy indrindra ho an'ny ankizy
Ny didy 3 an'ny Zero Waste
Tablecloths mba hitafy ny latabatra fararano